कसैले चिन्ता नलिगे हुन्छ क्रिकेट रंगशालाको जिम्मा महानगरपालिकाले लिगीसक्यो : रेणु दाहाल – Cn Chautari
पुष २८, २०७८ बुधबार 288
महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्रा ष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको ।स्वामित्व अब भरतपुर महानगर पालिका ले लिने बताएकी छिन्। दाहालले धुर्मुस-सुन्तली ।फाउण्डेशनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्यांकन ।
गरिसकेपछि रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी हुन्।हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ। हाम्रो सम्झौ ताअनुसार महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने हो।स्रोत जुटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि ।
महानगरले स्रोत जुटाउन आर्थिक सहयोगमा पनि जुटायो। राम्रो सहयोग जुटेको हो।आन्तरिक आयबाट पनि बजेट विनियोजन गरेर हस्तान्तरण गरेको हो।लगभग १० करोड बजेट महानगरको आन्तरि क बजेटबाट उपलब्ध गराएको हो।
महायज्ञ धनधान्याञ्चल आयोजना गरेर पनि सहयोग गरेका हौँ। १८-२० करोडको ।बजेट फाउण्डेशनलाई उपलब्ध गराएको हो। उहाँहरुले १७ करोड ऋण ।लागिसक्यो गर्न सक्ने स्थिती भएन भनेपछि ऋण लगाएर गर्ने कुरा भएन।
धुर्मुस सुन्तलीले स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै महानगरपालिकालाई स्वामित्व ग्रहण ।गर्न पत्र दिएको उनले बताइन्।सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै रंगशाला ।बनाउँदा लागेको ऋण र बहुवर्षीय योजनाअनुसार काम अघि बढाउन संघीय सरकारलाई ।
आग्रह गर्ने समेत बताइन्। ‘सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। स्वामित्व लिन्छ।सबै सरकारको आपसी र समझदारीबाट यो योजनालाई अघि बढाउँछौँ’ उनले भनिन् । माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष; वर्षमान पुन र जनार्दनलाई महासचिव ! बधाईको ओईरो (हार्दिक बधाई)
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी छ । हिजोबाट सुरु भएको महाधिवेशन ।पुष १५ गतेसम्म चल्ने जनाईए को छ । आज दोस्रो दिन बन्दसत्र हो ।अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
महाधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन अवेर राति सम्पन्न स्थायी कमिटी र महाधिवेशन सुरु हुने ।दिन विहान बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लगिएको छ।
जसअनुसार अध्यक्ष, १ वरिष्ठसहित ७ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र १ कोषाध्यक्षको प्रावधान गरेको छ।
अध्यक्षमा दाहालको विकल्प नभएको नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा बताईसकेका छन् ।
तर, अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद महासचिवमा भने तीन जनाको दाबी ।
रहेको बुझिएको छ। नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भुषाल ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने नारायणकाजी श्रेष्ठ चयन हुने बताईएको छ ।
६ उपाध्यक्षमा भने कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, मात्रिका ।
यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरूङ, हरिबोल गजुरेलको नाम चर्चामा छ ।
यी तीनमध्ये अहिले पुन उपचारको लागि चीनमा छन् । तर, दाहालले भने महासचिवमा अर्थमन्त्रीसमेत ।
रहेका नेता जनार्दन शर्मालाई ल्याउन चाहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
हुन त यसअघि पुनले आफूलाई नै
Prevसुर्खेतका राउटे चेली सँग सहरी विकास मन्त्री झाक्रीले लगाइन मित !
Nextदेवर भाउजुलाई राति एउटै ओछ्यानमा भेटे पछि गाउँले हरुले राम धुलाई (भिडियो सहित)
एमसीसीलाई समर्थन गर्दैनौं, सरकारबाट बाहिरिँदैनौं : सांसद चौधरी